Nandivali, Maharashtra, i-India
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Sanjyot
U-Sanjyot Ungumbungazi ovelele
Indawo yokubaleka ebukekayo, ukubukwa kwechibi futhi kuzungezwe izintaba eziluhlaza, izigodi nezimpophoma - indawo yakho ekahle yokuphumula! Kungakhathaliseki ukuthi ufuna iholidi elingenakho ukungcola noma udinga indawo enokuthula ukuze uzindle, sinesipiliyoni esihle seholide sakho! Ngenkathi yezimvula, indawo ishintsha ibe izulu emhlabeni! Indawo iyinani lemali, futhi siyajabula ukukwamukela ku-"Jaltarang" yethu. Njengoba iyi-duplex villa enefenisha ephelele, iyindawo efanelekile yemindeni emincane!
Ingu-2,300 sq.ft. I-duplex villa enefenisha ephelele enovulandi ombozwe ngezinhlangothi ezine. Yonke indawo yesakhiwo iyihektare elingu-1 elinamasimu, izihlahla kanye nezindawo zokuphumula zangaphandle, kanye negumbi elihlukile lomnakekeli esizeni. I-villa ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-9.
Indawo enhle yokuthwebula izithombe zangaphambi komshado
Ikhishi lihlome ngezinto zokupheka, amabhodwe namapuleti, nesiqandisi nesitofu segesi ukuze kube lula kuwe. Ungajabulela ukupheka wedwa, noma sixhumene nesitolo sokudla sasendaweni ukuze ulethe ukudla (ngenkokhiso) ukuze kube lula kuwe. Siphinde sihlinzeke ngamanzi okuphuza apakishiwe.
Indawo yokuhlala esitezi esiphansi inezihlalo, osofa, imibhede emibili netafula lokudlela elinezihlalo. Izitebhisi zikuyisa esitezi sokuqala lapho kukhona omatilasi abasele nezindawo zokulala. kunamakamelo amabili okulala elilodwa nelezinye izingane. Ikhabethe lokuzihambela liyatholakala eduze kwendlu yokugezela phansi ukuze ulisebenzise. Kukhona nendlu yangasese eyodwa eyengeziwe kule ndawo enokufinyelela ngaphandle kwendlu enkulu, sicela ubuze umnakekeli ukuthi akuqondise.
Imisebenzi efana ne-carrom board, chess namakhadi okudlala ayatholakala ukuze azijabulise. Itende ongalikhetha liyatholakala ukuze uthole ukuzizwisa okujabulisayo kwangaphandle, uma ukhetha. Ama-hammocks angasetshenziselwa ukuzilibazisa ukuthuthukisa umuzwa onokuthula.
umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-3, 2 osofa, omatilasi abangu- 5, imibhede yenetha engu-1
Indawo yakhiwe ngosebe lwedamu laseMulshi nomfula kanye nezinye izindlu zamapulazi ezisanda kwakhiwa. Ngesizini ye-monsoon, izimpophoma eziningi kanye nohlaza kuhlobisa izintaba nezigodi ezizungezile. Izindlela zokuhamba ezindaweni ezizungezile zingakuyisa ekubukeni okuhle phakathi kwemvelo kuzo zonke izinkathi zonyaka. I-Mulshi ikude nesiphithiphithi sempilo yedolobha, nokho isondele ngokwanele emadolobheni amakhulu njengePune neMumbai.
24x7 umnakekeli osendaweni uyatholakala ngaso sonke isikhathi. Siyatholakala ocingweni nasekubhaleni ukude kusuka ku-Pune, uma udinga olunye usizo.
USanjyot Ungumbungazi ovelele